Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịzụ ahịa » Zụ ahịa na - olee ebe ọzọ? Nnukwu Deadlọ Ahịa Osimiri Nwụrụ Anwụ!
Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa na Jordan • News • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Mgbe ị na-eche nke Oke Osimiri Nwụrụ Anwụ, ị chere maka nnukwu ụlọ ahịa? Gịnị banyere nnukwu ụlọ ahịa nwere ụlọ ahịa ndị oké ozu, ụlọ ahịa ihe na-eme ice cream, cafes, na ọbụna spa?
Ọmarịcha ụlọ ahịa mara mma na Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ, nke dị na mbadamba na ụsọ mmiri na nsọtụ ndịda nke nnu ahụ nwere nnu, na-enye ndị Israel na ndị njem nleta ngwaahịa na ọnụahịa pere mpe Ego agbakwunyeghị. Ego nke nkwụghachi ahụ ga-agbakwasị ụkwụ site na onye nrụpụta ahịa. Ndị njem mba ofesi ga-enwe ike ịrịọ mbelata ego abụọ maka na ha ka nwere ike nweta mmeghachi ụgwọ VAT na ọtụtụ ihe.
Oke Osimiri Nwụrụ Anwụ bụ ebe dịkarịsịrị ala n’elu ụwa ma gbaa gburu-gburu ya site n’ọdịdị dị egwu nke Ọzara Negev. Mmiri nnu nke ọdọ mmiri ahụ na-ebute aha ahụ Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ, n'ihi na ọ dịghị azụ nwere ike ịlanarị na mmiri nnu ahụ. Nsonaazụ ọzọ nke mmiri nnu dị n’Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ bụ ihe ama ama ama ama ama na ahụike ya na njirimara pụrụ iche nke mmadụ nwere ike ise n’elu ha.
E nwere ọtụtụ osimiri ọha na eze mepere n’akụkụ Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ. Osimiri ndị a ma ama gụnyere Ein Gedi Beach na ụsọ mmiri dị na ebe a na-akpọ Ein Bokek ebe ọtụtụ ụlọ oriri na ọ offerụ offerụ na-enye ụsọ mmiri onwe ha, ebe ụfọdụ ụsọ mmiri na-akwụ ụgwọ ntinye.
Ọ bụrụ n’ịheghị ihe ọzọ, ndị njem nleta nwere ike ịga ebe ahụ mgbe niile ịnụ ụtọ ikuku ikuku.
cafes ụgwọ Mgbarakwa -eri nwụrụ anwụ Oke Osimiri Nwụrụ Anwụ desert ozugbo discount abụọ Earth njedebe ntinye feature ego azụ Gaba! na-agwọ ọrịa ahụ ike ice ihe nracha Ndi Israel ihe odida obodo iduga Mpekarị okomoko nnukwu ụlọ ahịa aha -enye esenidụt ewu ewu ahịa onwe ngwaahịa Njirimara eme Oké osimiri shopping Southern spa echekwa ndụ tax Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ -eche uru VAT mmiri Mmiri